PressReader - Ilanga: 2017-09-07 - BASIZA UMPHAKATHI NGELEZINGULUBE
BASIZA UMPHAKATHI NGELEZINGULUBE
Ilanga - 2017-09-07 - Izindaba - SKHOSIPHI MTHEMBU
UKUZINIKELA kwezolimo nentshisekelo yokudala amathuba emisebenzi, kwenze abakwaMthethwa, eMadundube, eMbumbulu, eningizimu yeTheku basungula ipulazi lezingulube - eselidale amathuba emisebenzi kule ndawo.
IHouse of Pork, okuyipulazi likaMnu Sandile Mthethwa (39) noNkk Nozipho Mthethwa (30), ibonakala ibamba iqhaza elibalulekile emphakathini njengoba idala amathuba emisebenzi, ikakhukazi entsheni yakule ndawo.
Lokhu kuvele ngesikhathi uNgqongqoshe wezoLimo nezokuThuthukiswa kweziNdawo zaseMakhaya KwaZulu-Natal, uMnu Themba Mthembu, evakashele leli pulazi ngoLwesibili eyobheka ukuthi liqhuba kanjani njengoba lixhaswe wumnyango wakhe.
UMnu Mthethwa uthi yize konke kubukeka kuhamba kahle kodwa zisekhona izingqinamba abasabhekana nazo kuleli bhizinisi.
Ubike ukuthi ngaphambi kokuba baqale leli pulazi ngowezi-2012, kubathathe iminyaka emithathu ukwenza ucwaningo mayelana nokufuywa kwezingulube. “Ngaphambi kokuba singene kuleli bhizinisi, siqale sayofunda eBaynesfield Training Accademy ngowezi-2010. Yize konke kubukeka kuhamba kahle, kodwa iqiniso wukuthi ziningi izinselelo esisabhekana nazo.
"Uma uhambisa umkhiqizo wakho lapho sidayisa khona izingulube, konke kuncika ekutheni esimdayiselayo yimalini ayibeka etafuleni ngekhilo. Lokhu kwenza ingabikhona inqubekela phambili,” kusho yena.
Uthi yize kunjalo, bakwazile ukudala amathuba emisebenzi. Uthi okwamanje basaqashe intsha eyisi-7 ebihleli emakhaya, okuyizisebenzi ezine eziqashwe ngokugcwele nezintathu eziyitoho.
UMnu Sanele Zwane (29), ongomunye wabasebenza kuleli pulazi, uthi ukuba nothando kwezolimo kumenze washiya ikhaya eSoweto, eGauteng nomculo. Uthi useneminyaka emine esebenza kuleli pulazi futhi usefunde lukhulu mayelana nokufuywa kwezingulube.
“Umsebenzi engiwenzayo lapha wukuqinisekisa ukuthi izingulube zisesimeni esihle nokuqikelela ukuthi zinakho konke ezikudingayo. Lokhu kuhlanganisa ukuvuka ekuseni sibheke ukuthi amanzi akhona noma enele yini lapho kuhlala khona izingulube.
"Siphinde siqikelele ukuthi kuhlanzekile yini lapho zikhona ngoba lolu hlobo lwezingulube kalufani nolwehlathi. Lokhu kusho ukuthi kazizwani nokuhlala endaweni enodaka noma engcolile,” kusho yena.
Uthi ngemali ayithola ngokusebenza kuleli pulazi, uyakwazi ukuthumela imali ekhaya yondle umndeni. UMnu Mthembu uyale abalimi bakule ndawo ukuba basungule inhlangano yabo ukuze kuzoba lula ukuba umnyango usize lapho bedinga khona usizo.
“Kumele abantu bakuqonde ukuthi thina sifuna umuntu odinga ukulekelelwa hhayi ofuna ukwenzelwa. Okunye okumele bakwazi wukuthi uhulumeni kawuyena uNkulunkulu ofuna ukukhothanyelwa, kuguqwe uma ufuna usizo.
"Nanoma ngubani engeza kithina uma eseliqalile ibhizinisi bese ekhomba lapho efuna ukulekelelwa khona,” kusho uMthembu. Uveze ukuthi umnyango wakhe neDenmark basezinhlelweni zokusungula isikhungo esizofundisa ngokufuywa kwezingulube.